5 faaido caafimaad ee laga helo xabxabka/qaraha :
+251 944063882 ​
su’alo iyo jawaabo caafimaad ah
5 faaido caafimaad ee laga helo xabxabka/qaraha
xabxabku wuxuu ka koobanyahy 92% biyo iyo dhecaano taas oo siinaysa macaankiisa gaarka ah.
sidaan la isku raacsanyahay xabxabku waa mid kamida khudrada qaniga ku ah vitamin C, vitamin A iyo macdano kale oo jirka biniadamku u baahanyahay, hadaba halkaan hoose ka daalaco faa’idooyinka dheeraadka ah:
dib usoo celinta nafaqada jirka: xaaladaha uu jirka qofku lumiyo dheecaano iyo nafaqo badan oo ay ka mid yihiin kuleelaha, soonka bisha ramadaan, jimicsiga dheeraadiga ah jirka qofku wuxuu u baahan yahay in dib l oogusoo celiyo intii uu lunshay taas oo ay jawaab u tahay cunista xabxabku
wuxuu ka koobanyahay macdano muhiim ah: hal koob oo xabxab (154 grams) ah wuxuu ka koobanyahy macadanahaan iyo nafaqooyinkaan hoos ku xusan
Vitamin C: 21% qiyaasta nafaqo ee maalinlaha (Reference Daily Intake)
ka hortaga kanserka: cilmi baarayaashu waxay sheegeen in maadada la yiraahdo (lycopene ) ee ku jirta xabxabka ay ka hortagto noocayada kanserka sida kan caloosha iyo burooyinka dhakhsaha u kora
kor u qaadida caafimaadka wadnaha iyo murqaha: sidaan kor kusoo sheegnay xaaladaha gaarka ah sida soonka iyo jimicsiga ee jirka qofku u baahanyahay soo kabsasho dhakhso ah, hadaba maadada la yiraahdo (Citrulline) waxay u fiicantahay murqaha daalan iyoo wadnaha biniadamku uu ka samaysanyahay muruq
wuxuu u wanaagsanyahay habdhiska dheebshiidka qofka: sidaan kor ku xusnay xabxabka badankii waa dheecaano iyo biyo taas oo ah mid kamida sifooyinka cuntooyinka u wanaagsan dheebshiidka qofka iyo in horay loo burburiyo cuntadii dhakhsona ugu baahdo jirka intiisa kale.
Tags: qare, xabxab
Next PostQAYBAHA XANUUNKA SONKORTA.
QAYBAHA XANUUNKA SONKORTA.
DHIIG YARI (ANEMIA)
buurnaanta ama cayilka saa’idka ah!
muhiimada biyaha Q 1aad
(no title) March 10, 2020
corona virus, calaamadihiisa iyo ka hortaga! March 9, 2020
JEDWALKA TALAALKA-Somalia. January 14, 2020
SIDEE LOO MAAREEYAA MADAX XANUUNKA? January 3, 2020
Ahmiyada Salaada. January 1, 2020
page ka hore
© Copyright 2020 CILMISIDE -